Ny maha-zava-dehibe ny fanadihadiana ao amin'ny tsenan'ny Forex
Ny fanadihadiana momba ny tsenan'ny Forex dia tonga amin'ny endrika roa samihafa; fanadihadiana ara-teknika sy fototra. Ny fifanakalozan-dresaka dia nihanahana hatramin'ny nahaterahan'ny varotra izay ny fanadihadiana no tsara indrindra, na raha tokony hampiasa fampiarahana roa ireo disciplines, mba hahazoana fanapahan-kevitra ara-barotra kokoa. Ny tsy fahampian'ny fandinihina ara-teknika sy fototra dia mifamaly ihany koa amin'ny antsoina hoe "hypothesis" momba ny tsenan'ny efiona, izay milaza fa ny vidin'ny vidiny dia tsy azo tsinontsinoavina.
Na dia eo aza ny fifanakalozan-kevitra nandritra ny am-polontaona nandritra ny am-polony taona, raha ny tsara indrindra amin'ny fanadihadiana no tsara indrindra, ny iray dia manampahaizana momba ny varotra manam-pahaizana sy ny mpandinika dia ny hoe samy manana endrika sy fanampiana izay afaka manampy mpivarotra. Ny mpandinika dia manaiky ihany koa fa afaka maka aina mandritra ny androm-piainana sy ny fampiharana mba hahatonga azy ho manan-talenta amin'ny endrika roa, na amin'ny endrika roa samihafa. Ny fampiasana frst dia nampiasa ny fanadihadiana ara-teknika dia niverina tao amin'ny 1700's nataon'ireo mpivarotra hordeana sy mpivarotra, raha nanombohan'ny fanadihadiana ny fanaovan-jiro tamin'ny taonjato faha-18, tamin'ny fomba ofisialy nataon'ny Homma Munehisa, mba hamaritana ny fangatahana fanafarana fototra toy ny vary.
Maro ireo mpandalina fototra no handroaka ny fanadihadiana ara-teknika, manolo-kevitra fa ny ankamaroan'ny endriky ny teknika dia tsy afaka ary tsy miasa, satria ny "endriky ny tenany no manenika sy mitodika". Mety tsy hisalasala izy ireo hoe ny efciency sy ny hasarobidin'ny fampiasana matetika ny fampiasana azy: MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (parabolic stop sy ny sisa), Bollinger bands sns. Na izany aza, maro ny mpivarotra izay mampiasa fikarohana ara-teknika amin'ny drafitr'asa , izay milaza amin'ny fomba manokana fa ny fampiasana ny indostrialy, ny miditra ary ny fivoahana ny raharaham-barotra dia miasa. Tsy isaky ny fotoana, fa amin'ny fampiasana ny fahombiazany sy ny fahombiazan'ny fampisehoana, ny fandalinan'izy ireo ara-teknika dia miasa tsara amin'ny fotoana mba hahazoana antoka fa namolavola drafitra sy paikady azo itokisana izy ireo, "maranitra" tahaka ny mpivarotra matetika no manondro izany.
Na dia izany aza dia mahatsikaiky fa saiky ny mpikaroka ara-barotra rehetra dia mbola hampiasa endrika endrika fanadihadiana ara-teknika, eny fa na dia misy vanila aza, sarimihetsika maimaim-poana. Mety hanapa-kevitra izy ireo hoe inona no karazana vidiny tian'izy ireo: lampihazo, Heikin-Ashi, tsipika, pin-bars, sns. Na izy ireo dia hampiasa tetikady tena tsotra ho an'ny varotra, anisan'izany ny: tandrify ambony, ambany ambany, averina mivezivezy, loha sy soroka 'lamina, fractals, pivot pivot, Fibonacci retracement ary manoritra tsipika lamin'asa. Raha vao misy sombin-taratasim-panafody sasantsasany ao anaty tabilao, dia mety ho sahirana ny tabilao toy ny tabilao misy ny endri-tsoratra voalaza etsy aloha. Ary tsy ny fametrahana ny fametrahana ny fijanonana ary ny fametrahana ny fetran-dàlana handoavam-bola ihany koa ny endrika fanadihadiana ara-teknika?
Noho izany dia mbola mila mampiasa fampiharana ara-teknika aza ny mpandraharaha ara-teknika matihanina, dia aleony mifantoka amin'ny vaovao, ny fisehoan-javatra ary ny famoahana angon-drakitra mba hampifanaraka ny fanapahan-keviny. Ary hijanona amin'ny famoahana rehetra izy ireo, angamba amin'ny alàlan'ny fampiasana Twitter, na handoavana ny fandaniana fanampiny amin'ny fampiasàna izay lazaina hoe "squawk", amin'ny fikasana ny ho eo an-tampon'ny tsena sy ny fanapahan-kevitra momba ny varotra.
Na izany aza, ity fizarana ato amin'ny tranokalantsika ity dia tsy eto mba hifanakalozana ny mombamomba ny fanadihadiana fototra sy ara-teknika, dia mamolavola sekoly FX izahay izay hanatanterahantsika izany amin'ny farany, fa hanao famerenana fohifohy fotsiny momba ny fizarana fototra Ireo sehatra roa samihafa fandalinana.
Inona ny fampiasana teknikan'ny Forex?
Ny fanadihadiana ara-teknika (matetika antsoina hoe TA) dia ny fampisehoana ny hetsiky ny fnancial ho avy izay miorina amin'ny fandinihana ny fihenam-bidy teo aloha. Ny fanadihadiana ara-teknika dia afaka manampy ny mpivarotra hikaroka izay mety hitranga amin'ny vidiny amin'ny fotoana. Ny fanadihadihana ara-teknika dia mampiasa karazana endri-tsoratra sy tarehimarika izay maneho ny fihenam-bidy mandritra ny fotoana voafaritra. Amin'ny fanadihadiana ny antontan'isa avy amin'ny hetsika ara-barotra, toy ny hetsika fihenam-bidy sy ny volam-bahoaka, manantena ny mpivarotra handray fanapahan-kevitra momba ny vidin'ny fitarihana.
Maro ny mpandinika ara-teknika no tsy miraharaha ny vaovao. Mieritreritra izy ireo fa amin'ny farany ny endriky ny antsipiriany ary angamba ny fampisehoana ny famoahana vaovao ara-toekarena, dia hipoitra eo amin'ny tabilao. Raha ny marina, ny vidin'ny tablety dia mety matetika mandaitra alohan'ny hikarakaran'ny mpivarotra mihitsy aza ny angon-drakitra nivoaka, na nanana fahafahana hamaky ny vaovao ary handray fanapahan-kevitra tsara. Mety ho vokatry ny algorithmika / haingam-pifaneraserana izay afaka manatontosa ny vaovao amin'ny haavon'ny haavony alohan'ny hamalian'ny mpivarotra maro eto an-tany.
Inona no atao hoe fanadihadiana fototra momba ny Forex?
Ireo mpandalina fototra dia mandinika ny lanjan'ny fampiasam-bola, amin'ny sehatra forex dia mitaky ny fijerena akaiky ireo toe-piainana ara-toekarena amin'ny fanombanana ny volan'ny firenena. Maro ireo antony manan-danja lehibe izay mitana andraikitra amin'ny hetsiky ny volavolan-dalàna, ny maro amin'izy ireo dia voarakitra amin'ny antsoina hoe "fampitomboana ara-toekarena".
Ny endriny ara-toekarena dia ny tatitra sy ny angon-drakitra navoakan'ny governemanta iray, orinasa tsy miankina toy ny Markit, izay manazava ny fahombiazan'ny toekarena ao amin'ny firenena. Ny tatitra ara-toe-karena dia fomba izay hamaritana ny fahasalamam-bahoaka ara-toekaren'ny firenena amin'ny ankapobeny. Navoaka tamin'ny fotoana voatondro ny tahirin-kevitra dia manome ny tsena amin'ny endriky ny toe-karena misy eo amin'ny firenena; nanatsara na nolavina ve izany? Ao amin'ny varotra FX, ny fialana amin'ny median, ny angon-drakitra teo aloha, na ny zavatra efa nambara, dia mety miteraka fihenam-bidy sy volombava.
Indreto misy tatitra lehibe efatra izay afaka (amin'ny famoahana) hamandrihana ny vidin'ny vola
Ny vokatra (GDP)
Ny harin-karena dia avo indrindra amin'ny toekaren'ny firenena; ny sanda ara-barotra manontolo amin'ny entana rehetra sy ny tolotra vokarina any amin'ny firenena mandritra ny fotoana voafaritra. Ny GDP dia mitazona izany, noho izany, ny mpivarotra matetika dia mifantoka amin'ny tatitra roa navoaka talohan'ny fnal GDP fnal; ny tatitra avo lenta sy ny tatitra ofisialy. Ny fanaraha-maso eo anelanelan'ireo tatitra ireo dia mety hiteraka fiovana goavana.
Ny tatitra momba ny varotra antsinjarany dia mamaritra ny fividianana fivarotana varotra any amin'ny firenena iray manokana. Ny tatitra dia fampahafantarana mahasoa ny fividianana ny volan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny, izay ampifanarahana amin'ny fari-potoana hafa. Azo ampiasaina izy mba haminavina ny fanatanterahana ireo indizim-pandinihana lehibe kokoa sy hanombanana ny fitarihana avy hatrany ny toe-karena.
Ny fiovana eo amin'ny famokarana: orinasa, harena an-kibon'ny tany sy toeram-pandraharahana ao amin'ny toekarena iray ao amin'ny firenena dia afaka manondro ny fahasalaman'ny ankamaroan'ny toekarena. Mitatitra ihany koa ny fahaizany izy ireo; ny habaka izay ampiasana ny orinasan'ny orinasan'ny orinasa tsirairay. Ny idealy dia mila mahatsapa ny fitomboan'ny famokarana, na dia eo akaikiny aza.
Ny mpivarotra mampiasa io tahirin-kevitra io matetika dia manara-maso ny famokarana vokatra, izay mety ho tsy misy dikany amin'ny fangatahana angovo, dia misy fiantraikany amin'ny toetr'andro. Ny fanovana manan-danja eo amin'ny tatitra dia mety ho vokatry ny fiovan'ny toetr'andro, izay mety hiteraka fihenjanam-po amin'ny volam-pirenena.
Ny CPI dia mandrindra ny fiovan'ny inflation amin'ny vidin'ny entona mpanjifa manakaiky ny approx. zato isan-jato. Ity tatitra ity dia azo ampiasaina raha hijery raha misy orinasa mametraka vola na tsia amin'ny vokatra sy ny serivisy. Azo ampiasaina ihany koa izy io mba hamaritana raha na ny banky foibe na ny governemanta dia hampiakatra na hampihenana ny tahan'ny zanabola, mba hampangatsiahana na hamporisihana ny toekarena.